"I-White Horse" (i-whiskey): izibuyekezo, amanani
Ukudla nokuphuza, Amawayini nemimoya
"Ihhashi Elimhlophe" - i-whisky, efanelekile ngenhlonipho. Uyaziwa futhi uyajabula ukuthenga abalandeli bamazwe anotshwala angamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha.
Kuthiwa "i-White Horse" (i-whiskey) ithole igama layo elingavamile hhayi ngengozi. Lokhu kwenzeka ngoba kwakungamagama lawa avuliwe ebhokisini lokubhalisa elincane, lavula ngo-1742 emaphethelweni ase-Edinburgh. Izivakashi zazithanda ukuvakashela le ndlu ehlelekile, futhi ngemva kwesikhathi esithile igama lakhe laqhubeka nesiphuzo esisha. Kwenzeka ngokuhamba kwesikhathi, cishe eminyakeni eyikhulu nengxenye kamuva, lapho umshana kaJakobe Logan McKee owaziwayo ekwazi ukuhlakulela ukuhlanganiswa okuyingqayizivele nokuyingqayizivele kwe- Scotch whiskey edumile . Umphumela ukwedlula konke okulindelwe.
Ngokushesha wonke umuntu waqala ukukhuluma nge "White Horse" (i-whisky) ngokuhlonipha. UPeter McKee wenza lokho umalume wakhe ayekuphupha konke ukuphila kwakhe. Wayengumuntu osemusha ophikelela kakhulu futhi onenjongo owaqhubeka ephindaphinda amagama afanayo: "Akukho lutho olungenakwenzeka empilweni". Ngenxa yesiqubulo sakhe, uPetru wenze intuthuko enkulu. Ngomnyaka we-1890 ngesikhungweni se-corporation uJames Logan Mackie & Co, wakwazi ngokukhamba kwesikhathi ukuba enze "i-White Horse" esinye seziphuzo ezihle khulu e-UK, kodwana wamenza ahloniphe uphawu lokuthengisa lakhe emhlabeni wonke.
Kumele ngithi i-White Horse - i-whiskey enezingxenye ezithakazelisayo. Ukuhlanganiswa okucebile kuyamangalisa. Iqukethe izinhlobo ezingaba ngu-40 zohlobo olulodwa lwama-malt kanye no-whisky okusanhlamvu. Lokhu kunikeza ukunambitheka okukhulu nokuphunga okumnandi kwesiphuzo esilungisiwe. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuqaphele ukuthi igama lokuguga kwalo liyiminyaka engu-6, futhi lokhu kungaphezu kokuphindwe kabili okwenziwe imikhiqizo yalesi sifundo. Lesi sici asikwazanga nje kuphela ochwepheshe, kodwa futhi nabathandi abavamile bemikhiqizo yabaphathi baseScotland. I-Technologists yenkampani isebenze kahle ekubukeni kwebhokisi. Wayegcina ifomu lakhe elivamile nelebula elijwayelekile elijwayelekile ngesithombe sehhashi elimhlophe negama lomkhiqizo. Isixazululo esisha sasiyi-plug entsha yensimbi yesisindo, esasihle kakhulu kunaleyo esetshenziswe ngaphambilini. Ikhefu elisebenzayo livalwe ngokuqinile ibhodlela, futhi akusoze isidingo somuntu ohamba naye. Le ndlela entsha yayithandwa kakhulu namakhasimende futhi avunyelwe ukwandisa kakhulu inani lokuthengisa kwesiphuzo esisha.
Ngokuvamile ezitolo, amakhasimende acela ngqo iWhiskey whisky. Ukubuyekeza mayelana nalesi siphuzo kuvame ukuhle. Umkhiqizo ophuza utshwala unomusa omuhle othakazelisayo nephunga elimnandi lokusanhlamvu noju. Kulula kakhulu ukuphuza futhi angashiyi imiphumela engathandeki ekuseni. Lokhu kuhle kulabo abathanda ukuphuza kakhulu. Okokuqala, utshwala buyashisa kancane, bese kuphela uqala ukubonisa konke ukunambitheka okungcono kakhulu. Kukhona umbono wokuthi i-whisky ngokuvamile ibonakala njenge-moon, kepha "ku-White Horse" lesi sitatimende asisebenzi. Ukuze uzizwe kahle ukuhlanganiswa okuphelele, umkhiqizo kufanele udakwe undiluted. Kodwa kungcono kakhulu kumadoda. Futhi abesifazane banganezela ijusi elincane lelamula. Lokhu kuzokwenza kube lula ukuphuza isiphuzo futhi unikeze isikhangiso esikhethekile ekunambithekeni okuqhakazile kakade. Ngaphezu kwalokho, intengo ephansi kakhulu ivumela abathengi abaningi ukuba bajwayele lo mkhiqizo osemangalisayo waseScotland.
Kodwa akuwona wonke umuntu onombono onjalo mayelana ne-whisky "White Horse". Ukubuyekezwa komkhiqizo Kukhona okungalungile futhi okubukhali. Omunye ukholelwa ukuthi ukunambitheka kwakhe akusihle njengoba singathanda. Kukhona abantu abakholelwa ukuthi inani elincane kakhulu liwumphumela wekhwalithi embi yomkhiqizo noma ukutholakala kwamakhohlisi kwinethiwekhi yokuthengisa. Ukuzikhethela, okuyiqiniso, akududuzi, kodwa konke kuxhomeke ekutheni umthengi ngamunye anambitheke. Uma othile ethanda i-vodka ngaphezulu, ngakho-ke akunamsebenzi ukukhuluma nge-charm ye-whisky yekhwalithi. Ngeke aqonde futhi ngeke ayamukele. Futhi abathandi abanokuhlangenwe nakho banikeza isinqumo sokusheshisa. Mhlawumbe, izindlela ezingavamile zokunikeza zizosiza ukuqonda kangcono futhi zikhule zithanda isiphuzo esingavamile. Thatha, isibonelo, indlela yabasesiqhingini, lapho amaconsi amaningana amanzi ajwayelekile ehlanganiswa egilazini. Khona-ke, ukutholakala kotshwala akuzwa kangako, futhi ama-shades amafruity atholakala kakhulu. Futhi lokhu ngokwayo kukhuluma ngamakhono afihlekile esiphuzo sasendulo kanye nekhwalithi layo elingenakuphikwa.
Labo abakhetha ukuthenga i-whiskey "I-White White, intengo akumele ikhathazeke. Izimpahla ezinjalo zibiza njalo. Futhi uma othile efuna ukuchitha imali ngesiphuzo esihle, ama-ruble angu-100-200 engeziwe kule ndaba ngeke asebenze. Kodwa ungacabangi ukuthi inganekwane yeScotland izobiza imali enhle kakhulu. Akunjalo. Nakuba i-corporation Diageo, manje esebenzayo ekukhiqizeni kwayo, isebenzisa isimiso samanani nokuhambisana kwekhwalithi kumgomo wayo, kodwa siyisebenzisa ngokusebenza ngaphakathi kwemingcele efanele. Ngokujwayelekile, i-whiskey "i-White Horse" ifika nelebula elijwayelekile eliphuzi emabhodleleni ezitshalo ezahlukene. Futhi kusukela ngo-2010 kuvele inguqulo entsha, okwakuhlelwe isikhathi sokuhambisana nonyaka we-110 wokuqala okusemthethweni kokuthunyelwa kwamazwe angaphandle. Ihluke kokudlule kuphela ekubukeni. Elebula elimnyama, izinombolo ezinkulu "zingu-1900" - usuku lokugubha usuku lokukhumbula. Uma kungenjalo, iziphuzo zifanayo, futhi intengo ingahluka kancane kakhulu, kuye ngokuthi umthamo wesitsha.
Izintengo ezilinganiselwe ze-Whiskey White Horse
№ п / п Igama lomkhiqizo Umqulu wokuqukatha isitsha, amalitha Inani, ama-ruble
1 Ihhashi elimhlophe 0.35 550
2 Ihhashi elimhlophe 0.5 585
3 Ihhashi elimhlophe 0.7 945
4 Ihhashi elimhlophe 0.75 960
5 Ihhashi elimhlophe 1.0 1190
6th Ihhashi elimhlophe 4,5 5700
I-7 I-White Horse 1900 0.5 850
I-8 I-White Horse 1900 0.7 1160
Kuhlale kungcono ukuthenga utshwala ezindaweni ezikhethekile. Kuphela lapho ungaqiniseka ngekhwalithi yezimpahla. Izindleko esizixoxile kakade, etafuleni ngenhla ungabona ukuthi yiliphi inani le-whisky "White Horse" lentengo (0.5). Intengo ibhodlela elinjalo, njengoba ubona, litholakala ngezansi. Ngakho, lokhu kuyiphakheji enenzuzo kakhulu. Izindleko zesiphuzo kwezinye izinhlobo zokupakisha kubonakala zingaphezulu kakhulu. Kungenzeka ukuthi izindinganiso zomhlaba jikelele ezamukelwayo zisebenza lapha. Phela, enkundleni yokuhweba, ungathola amabhodlela amaningi ngamandla angu-0.7 no-0.75 amalitha. Ngakho yamukelwa eYurophu. Sisebenzisa lolu hlobo lokupakisha kuphela iwayini neziphuzo ezidakayo ezidakayo. Futhi yonke imikhiqizo engokomoya enamandla ka-30-40 degrees nangaphezulu igcwele amaphodlela angama-litre. Mhlawumbe, umkhiqizi wenkampani usebenzisa ivolumu evamile yemikhiqizo yokuthekelisa ukuze athole abathengi abaningi. Isevisi yokumaketha kufanele icabangele zonke izici zemakethe. Yebo, futhi intengo (ama-ruble angu-585-600), ngokuyisisekelo, yenza ucabange.
Ngokuvamile ezitolo abathengi babuza ngokuqondile i-whiskey "i-White Horse" ilitha eli-1. Intengo ibhodlela elinjalo liphakeme kakhulu, kodwa kufanele licatshangelwe ukuthi likhiqizwa, njengombuso, ebhokisini lesipho. Lokhu kuthengwa kunezinkulungwane zezindawo. Kungaba yisikhumbuzo esihle kakhulu noma isethulo "sokuthobeka" njengesibonakaliso sokuhlonipha okujulile nokubonga. I-whiskey enjalo ayinamahloni okuphatha abangane abalungile noma uphawu lomcimbi obalulekile. Uphawu oluhle lweScotland alukwazi ukuphazamisa umkhosi owodwa. Ngezinye izikhathi iphakheji lesikhumbuzi lenziwe ngenguqulo ekhulisiwe: izibuko ezimbili ezikhethekile ezifaka uphawu zifaka ibhodlela. Le nkampani nganoma iyiphi indlela izama ukwehlukanisa uhla futhi ijabulise izifiso zabathengi abakhulu. Uma sicabangela izindleko zebhodlela elilodwa le-whiskey (ama-ruble angu-1190-1380), kungathathwa njengokuthengwa okuhle. Ungakhohlwa ukuthi okuqukethwe - akuyona nje isiphuzo esingama-40 kuphela, kodwa umkhiqizo owenziwe usebenzisa ubuchwepheshe bezintatheli ezidumile zaseScotland. Kubaluleke kakhulu ukuthi kuzo zonke lezi zinsuku ayizange ishintshe okuningi futhi ifinyelele ezinsukwini zethu cishe ngendlela yayo yasekuqaleni.
Ukuqapha kungaphezu kwakho konke
Esikhathini esitolo kwanoma yimuphi umuntu, ukungabaza kuphakama: ingabe wathenga ngempela i-whiskey yama-Whit Horse? Indlela yokuhlukanisa inkohliso emkhiqizo wemvelo? Phela, ngokusho kwezinsizakalo ezikhethekile, cishe ingxenye yesithathu ye-whiskey ethengiswa ezweni lakithi iyakhohlisa. Kuyinto amahloni uma kufanele ngibhekane nalokhu ngokwami. Ukuze uzivikele empahla "engakwesokunxele", udinga ukwazi imithetho embalwa:
1. Ukutholakala kwezitembu ze-excise. Yiqiniso, muva nje naye wafunda ukwakha.
2. Funda okuqukethwe komkhiqizo oboniswe ngelebula ngokucophelela. Akufanele kube nama-dyes, ama-flavour, izithasiselo zokudla, i-ethanol noma ezinye iziphuzo. Ukuze i-whisky, ibhalt kuphela lebhali noma ibhali lingaboniswa .
3. Funda umbala womkhiqizo. Izinguquko ezivela ekukhanyeni kuya kumnyama wegolide ezamukelekile ziyamukeleka. Ngaso sonke isikhathi ingabe i-White Horse ingabonakali noma imnyama.
4. Ukuze ukhuthaze ngokugcwele, udinga ukuvula ibhodlela phansi bese ubona ukuthi i-liquid iziphatha kanjani ngaphakathi. Umkhiqizo wemvelo uzovela ngokushesha phansi, futhi ngezansi kuyoba khona ukudonsa okukodwa okukhulu. Ukuqokwa kuzokugeleza kancane kancane izindonga zangaphakathi zethangi.
Uma zonke izimo zigcwaliseka, ngakho-ke, uma ufikile ekhaya, umthengi ngeke adumale.
I-velvet yasebhiya: izinganekwane, zokupheka nezakhiwo
"I-Talisker" (I-Talisker) - I-whiskey yase-Scottish engabodwa yama-malt. Ukubuyekeza kwamakhasimende
Indlela yokwenza iwayini kusuka ku-currant ngezandla zakho
U-Cherry othululela ekhaya ulungiselelwe ngokumane futhi ngaphandle kwemali eningi
Indlela yokwenza umkhosi ekhaya kusuka kumazambane? Indlela yokunquma ukuzimisela kwe-barge ukuze uchithe?
Eningiliziwe isinkwa recipe ku nhlama ebilisiwe okuzenzela
Ukufaka Ubuntu eduze kwe-Windows 10: imiyalelo yesinyathelo ngesinyathelo
Izidakamizwa "rimantadine": Umhlahlandlela, iseluleko
Sicily Izikhumulo zezindiza. Air esiqhingini amasango abadumile
Chocolate lesikwele se Ikhekhe
Usesitolo ufuna izingubo zokugqoka ngezandla zabo - ibha okuhle wezangaphakathi